Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Yintoni i-MVP kunye nendlela yokuyifaka kuYilo lweHardware
Ngewuke weva nge-MVP -eMveliso encinci eVumayo- kwaye mhlawumbi uyayinxibelelanisa nesoftware. Ngokwenyani, lo mbono usebenza kwizixhobo zehardware ngokunjalo. Kule nqaku, uya kufunda nge-MVP kwaye ufumane ukuba ungayisebenzisa njani uyilo lweemveliso zombane.
Umntu unokunciphisa iindleko kunye nexesha loyilo kunye nokwenza imveliso enezinto ezincinci.
Sebenzisa umgaqo we-MVP uya kufumana ulwazi ngakumbi malunga nezinto ezikhethwa ngabathengi.
I-MVP yimveliso eyenziwe ngenani elincinci lomzamo.
Kucacile ukuba uyilo kunye nokwenziwa kwemveliso, nokuba yeyesoftware okanye yezixhobo, kufuna umgudu kunye neendleko. Kwimeko apho imveliso intsha okanye ungaqinisekanga malunga nokuqonda kwabathengi ngayo, unokunciphisa iindleko kunye nexesha loyilo kunye nokwenza imveliso enezinto ezincinci. Ngokwendalo, ukwenza imveliso unokucinga kuphela ukuba bafuna ntoni abathengi bakho kwaye bazimisele ukuhlawula. Ngesi sizathu, ungasebenzisa umgaqo we-MVP kwaye ufumane ulwazi ngakumbi malunga nezinto ezikhethwa ngabathengi. Ngokwenza njalo, uya kuqokelela ingxelo evela kubathengi bakho bokuqala. Oku kukuvumela ukuba uphuhlise imveliso yakho yexesha elizayo uxhomekeke kwisimo sengqondo sabathengi. Ke, i-MVP yimveliso eyenziweyo kunye nenqanaba elincinci lomzamo.
Uyisebenzisa kanjani i-MVP kwizixhobo zekhompyutha?
Ngokusisiseko, ukusetyenziswa kwalo mbono kwahlukile kuyilo lwehardware. Okokuqala, kuya kufuneka ubeke iseti efanelekileyo yeempawu kwimveliso yakho. Gcina ukhumbula ukuba inqaku ngalinye liyakwandisa ubunzima bemveliso yakho kwaye, ngenxa yoko, iindleko kunye nemizamo yoyilo lwayo. Ukuthintela ukongeza amanqaku amaninzi, khetha. Kwindawo yokuqala, ungadwelisa zonke izinto ezinokubakho kwimveliso yakho, uzilinganise ngokuntsokotha kunye neendleko kwaye ubeke phambili ngokubhekisele kwiimfuno zabathengi ezicingelwayo.
Okulandelayo, misela indleko kunye nexesha lokuphuhliswa kwento nganye kwaye, ekugqibeleni, indleko zemveliso yakho. Fumana ibhalansi phakathi kwexabiso lokuvelisa kunye nexabiso lemveliso yakho. Kuyacetyiswa ukuba ujolise kwezi zinto ukholelwa ukuba ziya kongeza elona phulo liphezulu kwimveliso yakho.
Emva kokuba ubeke amanqaku, ungabandakanyi abo banobunzima obuphezulu kunye neendleko ukusuka kuluhlu lwakho. Iimpawu ezintsokothileyo nezixabisa kakhulu azinakwenziwa ngokweMVP. Endaweni yoko, chonga izinto ezonga iindleko ngokubekwa phambili kubathengi. I-MVP kufuneka ibandakanye izinto ezilula kwaye ezingabizi kakhulu.
Okulandelayo, fumana ubuncinci bemveliso efanelekileyo kwimarike ngokukhawuleza. Umbono osisiseko we-MVP ulele kungekuphela kwiindleko ezisezantsi kodwa nakwixesha elincinci elichithwe kuyilo lokuqala lemveliso. Ke, gcina ixesha lakho kwaye uqhubeke nokufunda iimfuno zabathengi. Unokuqokelela ingxelo evela kubathengi ngokuthengisa kunye nedatha yokuthengisa eyahlukeneyo. Le datha iya kusetyenziselwa ingxelo yexa elizayo yemveliso yakho eya kuthi ihlangane neemfuno zabathengi. Kwangelo xesha, usebenzisa ingxelo unokuthatha isigqibo sokuphuhlisa imveliso eyahlukileyo. Gcina ukhumbula ukuba ezinye zeempawu ezingafunekiyo ze-MVP yakho ziya kubandakanywa kuhlobo olutsha lwemveliso yakho.
Ke, i-MVP ivumela ukuchitha ixesha elincinci kunye neendleko kuyilo lwemveliso, ukuqokelela ingxelo evela kubathengi bokwenyani kunye nokulungelelanisa imveliso yakho kwingxelo. Funda amanqaku amaninzi kuyilo lwe-elektroniki.